Jessica Alba: Izimfihlo Zobumnandi
Ukukhulelwa kuhlobisa. Futhi lo Jessica Alba othakazelisayo uwubufakazi obucacile.
UJessica wayeneminyaka engu-17 kuphela ubudala, lapho uJames Cameron, umqondisi we-Titanic, ememela ukuba adonsele uchungechunge lwakhe lwethelevishini "Ingelosi Ebumnyama." Kwaphela iminyaka engu-10 waba yinkanyezi yangempela yaseHollywood, edlala kumafilimu ethi "Fantastic Four", "Sin City", "Inhlanhla, i-Chuck!", "I-Eye" ne-"Anesthesia." Jessica Alba izimfihlo beauty kithi sonke wembula!
Lelihlobo, uJessica wabamba ama-premieres amabili ngesikhathi esisodwa. Esikrinini kufika umculi uMike Myers ngokubamba iqhaza kwakhe "Ubudli bobulili". Futhi ngoJuni, umlingisi waba umama. Ngaphambi nje kokuzalwa kwetheyi le-mint e-Beverly Hills Hotel, uJessica, owayekhanya ngenjabulo, wasitshela ngokukhulelwa kwakhe kokuqala nangamalungiselelo okukhulisa umntwana akwakha nomyeni wakhe i-Cash Mountain Warren, ngakho-ke uJessica Alba ophethe imfihlo ubuhle inombolo enkulu!
UJessica Alba wazala indodakazi yakhe ngoJuni 7. Abazali bakhe bathiwa ngu-Onor Mari. Kwakukhona umntwana ekukhanyeni komunye wemitholampilo ehloniphekile eLos Angeles, lapho izinkanyezi eziningi zibeletha khona.
Ukuphila kwakho kudwetshwe yihora. Ukukhulelwa kuhambisana kanjani nalesi simiso?
UJessica Alba: Ngempela, ekupheleni kosuku ngivame ukukhathala kangangokuba angikwazi ukuvula umlomo wami, ngihlale phansi futhi ngihlale. Ngakolunye uhlangothi, ukukhulelwa kwangisiza ukuba nginciphise ijubane lokuphila. Ngangihamba njalo. Kuhle ukuthi manje ungenza i-breather!
Ingabe usuvele uthenge i-dowry yengane yakho?
Yebo, sizama ukuzilungiselela ukubonakala kwemvuthu. Indlu yami emine phansi enezitezi ezinkulu zokuvunguza yayingeyona eyenzelwe izingane. Ngakho akuyona into enkulu: ukudweba, ukuqedela, ukuguqulwa. Ngivele ngibheke isikhalazo kanye nezinye ifenisha enenethiwekhi yezitolo ezithandwayo. Ngendlela, baqala umzila omusha, oklanyelwe ukusiza abesifazane abampofu ... Ngokuvamile, ngakhetha uketshezi lwezinkuni eziphilayo, nayo yonke ifenisha yezingane esayithenga khona, yenziwe ngopende oluphephile.
Uyazi, ngangivame ukucabanga ukuthi igumbi labantwana liphikisana njalo nendlu yonke. Kodwa manje ngabona ukuthi lokhu akunjalo.
Ngesikhathi ukhulelwe, unayo ukunambitheka okungavamile kokubikezela?
Yebo. Ukulangazelela okungalindelekile kwe-ulamula, ama-orang, i-lemonade - ngaphambi kwakho konke lokhu ngangingenandaba. Kodwa ama-truffles, ozithandayo ngaphambili, angidli manje. Futhi angikwazi, kukhona ama-steaks nokudla okwesipuni.
Wake wake wacabanga ukuthi uzoba ngumama onjani? Ngacabanga. Angifuni neze ukuba umngane wengane yami. Ngifuna ukuba ngumama nje. Kodwa ngesikhatsi esifanayo ukuthi lokho ngezinjabulo zakhe nokudabuka ingane kumele ifike kimi. Angizange ngifihle lutho. Kuthembekile ngokuphelele. Ngizokwenza konke okusemandleni ukwenza lokhu.
Ama-bloodline amaningi ahlukene ahlangane nawe. Yisiphi isiko ongathanda ukunamathela kumntanakho?
Ngicabanga ukuthi into ebaluleke kakhulu kithi kuyoba ngamasiko aseMexico.
Isibonelo, ngoKhisimusi, sonke sihlabelela "Las Pasados" (into enjengomculo weKhisimusi), kanye namaKhisimusi aseSpanishi nesiNgisi. Ngaphezu kwalokho, ngenxa kagogo, umndeni unamasiko amaningi. Futhi ngingathanda ukuba ingane iwathathe.
Futhi uthanda ukudla okunjani emndenini wakho? Ngokuphathelene nezintandokazi zokupheka, angivumelani neCash ekuthandeni. Wakhulela e-Negro cuisine, Mina-waseMexico.
Kodwa thina, ngokwesibonelo, kokubili njenge-sushi. Ngakho ingane yethu izokwazi ukuthanda izinto ezahlukene.
Uhlobo luni lobaba ocabanga ukuthi i-Cache izoba?
Ngokuvamile, sibheke ngokulinganayo ukukhuliswa kwezingane. Nokho, ngimelene ngokuphelele nomntwana ukuba adle ukudla okusheshayo. Futhi i-Cash, cishe cishe, izovela kulabo obaba abayinyathela kuMcDonald's ngenkohliso, bese bemtshela ukuthi angangitsheli ngakho.
Sitshele ngefilimu yakho entsha ethi "Ubukhulu bezocansi" nguMike Myers. Umlobi weSkripthi uMike ungumlingisi kaDee Puck Chopra (i-endocrinologist yaseMelika, umbhali wezincwadi zemithi yamaNdiya). Ngakho-ke, esimweni sakhe, izidakamizwa ezimbili - iHockey nefilosofi yasempumalanga - zahlanganiswa. Engeza kulokhu umoya we-comedy we-comedy "i-Austin Amandla"! Ngidlala umnikazi wethimba le-hockey elingajabuli eliqasha ubulili bobulili ukwenza umdlali oyinhloko empilweni yomuntu siqu.
Wake wafuna njalo ukuba umama osemusha?
Ngicabanga ukuthi manje yisikhathi esihle sokubeletha. Akukona isikhathi sekwephuzile futhi akusilo kusheshe kakhulu ukuzwa uzilungele umama. Abazali bami babeneminyaka engu-20 ubudala lapho benginami. Lokhu akuyona neze into efanayo no-27. Ngakwazi ukuphila impilo eminingi kakhulu futhi ngiyajabula ngokuthi ngizoba ngumama okwamanje.
Ngesikhathi elinde umntwana, uJessica washintsha ukuqeqeshwa kwakhe okuvamile nokuqinisa amandla e-yoga kwabesifazane abakhulelwe. Ngemuva kwalokho, maduze nje uJessica Alba uzothanda izibalo lapho ingane yakhe izalwa. "Ngizwile ukuthi kwenza lula ukuzalwa," esho. Ngaphezu kwalokho, indawo enkulu kwimenyu yomama wesikhathi esizayo yayithathwe imifino nezithelo, ikakhulukazi izithelo ze-citrus. "Angikaze ngidle ukudla," kusho u-Alba. - Ngisanda nje, ngidla izithelo eziningi kunangaphambili. Yilokho konke! ».
U-Andrei Arshavin ushintshe umkakhe ovumelekile ngemuva komshado
"Indlu-2": uchungechunge lokuhlukanisa luqhubeka, ekuhambeni kuka-Evgeny Feofilaktov
Isikhumbuzo somshado uKsenia Borodina noKurban Omarov sibhalwe isigaba sempahla
U-Maxim Averin ujabule abalandeli ngesithombe se-naked, isithombe
Usuku lokuzalwa kuka-Olga Navrotskaya
UDmitry Shepelev wabhala isitatimende emaphoyiseni ngoyise kaZhanna Friske
U-Ksenia Sobchak wathola ubufakazi bokukhohlisa uSvetlana Zhurova
Indlela yokubopha ama-mittens, amagilavu
Indlela yokubhalisa umshado ehhovisi lokubhalisa
Iphupho elinamandla lezinyane
I-horoscope yama-sexy. I-Capricorn, i-Aquarius, i-Pisces
URoonon Gazmanov wahlabela izimoto ezibizayo sezulu elihle
Okushisayo for New 2018: zokupheka elula futhi okumnandi ngezithombe step-by-step
Imikhuba emibi yabesifazane, indlela yokuqaphela nokuyiqeda
Iklabishi isaladi nenkukhu nesithombo
Ukungenzi lutho nokukhuluphala ngokweqile
Okulula, okupheka okupheka zokupheka
Indlela Yokwenza I-Barbie Doll Makeup
Ingxoxo nomlobi wezeTV u-Olga Gerasimyuk
Kungani amadoda ephonsa abesifazane ngaphandle kwencazelo
Ukubeletha umntwana onempilo ngaphandle kobuhlungu nokwesaba